လုခ်ရှောဟာ မန်ယူအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုနေတာပါ
မန်ယူအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ လုခ်ရှော Luke Shaw
10 Sep 2018 . 11:47 AM
မန်ယူအသင်းရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ လုခ်ရှော Luke Shaw ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ လုခ်ရှော Luke Shaw ဟာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကနေရုန်းထွက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာမန်ယူအသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်သလို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအတွက် မန်ယူတစ်လတာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့သူပါ။
လုခ်ရှော Luke Shaw ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းဟာ ၂၀၁၉ နွေရာသီမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်မှာကြောင့် လုခ်ရှော Luke Shaw ဟာ အခုလို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုနေတာဖြစ်ပြီး မန်ယူအသင်းအနေနဲ့လည်း ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ လူငယ်ကစားသမားကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လုခ်ရှော Luke Shaw ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ Nations League ပြိုင်ပွဲ စပိန်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူ ကာဗာဟာလ် Carvajal နဲ့ ဘောလုံးခေါင်းယှဉ်တိုက်ရာကနေ သတိလစ်မေ့မျောတဲ့အထိ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး မကြာခင်ပြန်လာမှာပါလို့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လုခ်ရှော Luke Shaw အနေနဲ့ အခုတစ်ပတ်ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၀က်ဖို့ဒ် – မန်ယူ ပွဲကိုတော့ လွဲချော်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါတယ်။
လုခ်ရှော Luke Shaw ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က မန်ယူအသင်းကို ဆောက်သမ်တန်အသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း(၃၀)နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်က ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားတွေထဲမှာ ဈေးအကြီးဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
Photo: Evening Standard , Manchester United
မနျယူအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ စောငျ့မြှျောနတေဲ့ လုချရှော Luke Shaw
မနျယူအသငျးရဲ့ ဘယျနောကျခံလူ လုချရှော Luke Shaw ဟာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ စောငျ့မြှျောနပေါတယျ။ အသကျ(၂၃)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ လုချရှော Luke Shaw ဟာ ဒဏျရာပွဿနာတှကေနရေုနျးထှကျခဲ့ပွီး လကျရှိမှာမနျယူအသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွကစားနသေူဖွဈသလို ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလအတှကျ မနျယူတဈလတာအကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကိုလညျး ရရှိခဲ့သူပါ။
လုချရှော Luke Shaw ရဲ့စာခြုပျသကျတမျးဟာ ၂၀၁၉ နှရောသီမှာကုနျဆုံးမှာဖွဈမှာကွောငျ့ လုချရှော Luke Shaw ဟာ အခုလို စာခြုပျသကျတမျးတိုးလိုနတောဖွဈပွီး မနျယူအသငျးအနနေဲ့လညျး ခွစှေမျးပိုငျးတိုးတကျလာတဲ့ လူငယျကစားသမားကိုအသငျးမှာဆကျထိနျးထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
လုချရှော Luke Shaw ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ Nations League ပွိုငျပှဲ စပိနျအသငျးနဲ့ပှဲစဉျမှာ ပွိုငျဘကျနောကျခံလူ ကာဗာဟာလျ Carvajal နဲ့ ဘောလုံးခေါငျးယှဉျတိုကျရာကနေ သတိလဈမမြေ့ောတဲ့အထိ ဒဏျရာရရှိခဲ့ပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ အခွအေနကေောငျးမှနျပွီး မကွာခငျပွနျလာမှာပါလို့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လုချရှော Luke Shaw အနနေဲ့ အခုတဈပတျကစားမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ ဝကျဖို့ဒျ – မနျယူ ပှဲကိုတော့ လှဲခြျောဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားနပေါတယျ။
လုချရှော Luke Shaw ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှဈက မနျယူအသငျးကို ဆောကျသမျတနျအသငျးကနေ ပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျသနျး(၃၀)နဲ့ရောကျရှိလာခဲ့သူဖွဈပွီး အဲဒီအခြိနျက ဆယျကြျောသကျကစားသမားတှထေဲမှာ ဈေးအကွီးဆုံးကစားသမားအဖွဈလညျး မှတျတမျးဝငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
by Ko Kyue . 43 mins ago